Home Wararka Qaraxyada Shacbiga lagu Laaynayo Xelligaan Doorasho waa Heshiis ka Dhaxeeya NN Iyo...
Qaraxyada Shacbiga lagu Laaynayo Xelligaan Doorasho waa Heshiis ka Dhaxeeya NN Iyo Shabaabka.
Waxaa soo baxaya warar sheeegaya in qof la sheegay in la soo diray oo lagu soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxaa uu isku qarxiyay goobtii la geeyey oo Suuqa ku yaalla meel u dhow Isgoyska Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho, waxaana ka dhashay wixii loogu talagalay inay ka dhashaan oo ahaa khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Waxyaabaha naxdinta leh oo diin la’aanta leh ayaa ah:
In ruux Muslim sheeganaya oo waliba sita Magac Muslim oo haddana jooga dalka ay dadkiisu muslimiin yihiin ayaa waxaa uu isku qarxinayaa suuq ay haween, masaakiin iyo xamaalato naftooda u shaqeysta ay quud xalaal ah ka raadsanayaan. Ruuxaan oo intaas oo qof Janno u diraya sida quraanka noo sheegay wa inteenna aaminsan aayadaha ilaahay marka aan ka tagno kuwa sida daneysiga leh u tarjumanaya aayadahan rabbi. Ruuxaan oo isagana Naar ku tagaya ficilkan naxdinta iyo xanuunka leh oo la hubo inuu naartagayo isaga iyo kuwii soo diray sida ku cad aayadaha rabbi.
Waxaa kaloo naxdin iyo amakaag leh inay ruuxaan soo direen Dad leh waxaan rabnaa in diinta Islaamka dadkaan ku xukunno, waxayna noo banneyneysaa inaan dili karno caruur, caamo, ciroole, haween, masaakiin iyo xoogsato xalaal quutayaal ah maadaama aanan hadda heshiis la nahay xukuumadda Fahad iyo Farmajo oo iyaga heshiis ku nahay in shacbiga la cabiidiyo si ay daneennaha kulmay annag iyo NN ay sidaas ku jirto.
Waxaa la yaab leh in dowladdii ay dadkan ku tashanayeen ay heshiis is badbaadin ah kula jirto kuwa wax dilaya maadaama ka soo dirayaa uu qeyb ka yahay hesiiskas, kaas oo ah inaan kuwa wax dilayaa aysan soo aadin madaxda sare iyo goobaha fisqiga yaallo oo ay ku caweeyaan madaxda ee isku muujiyaan inay naftooda u qoonsadaan xoogsatada haweenka u badan oo ay suurgal tahay inay mar hore ka dileen aabihii u aadeegi jiray ee Xabad Kalluun ah madaxda uga soo qaadi jiray Badda oo uu galay xalay sagaal saac ama 3-da aroornimo salaadda ka hor si uu xabbadaas kallun ah u soo qabsado, kadibna madaxa ku keenay suuqa saaka lagu dilay oo ku yaalla Kontrolka Afgooye.
Waxaa la yaab leh sababta aysan u dhimanin, una dhaawacmin oo ugu yaraan aan loo weerarin madaxda saree e dayacday mas’uuliyaddii loo igmaday, kadib markii ay heshiis hoose la gashay kooxaha wax laaya oo ay si qarsoodi ah uga tirsan yihiin. Tusaale waxaa kuugu filan dayaacadaha joogtada ah ee aan la hubin Karin oo ay dowladda beryahan ku sheeganeyso waxaan dilnay boqollaal al shabaab ah. Waa been cad waayo Al shabaana ma qiran in cid laga dilay, dowladda NN wax caddeyn ah sooma bandhigin ee waa daacaayad doorasho doon ah oo lagu marin habaabinayo dadkii horay loo marin habaabiyey ee la yiri gurayaha ay dumiyaan waa idiin shiseynaa, ganacsiga ka burbura waan kuu mgadhabeynaa, ninkii soo sheega Al Shabaana waxay u direynaa dibadda boqol kunnna waan siineynaa.
Taliyaha NISA Fahad Yasiin, Taliyaha Ciidanka Lugta Gen. Biixi oo aan weli laga gooyn wixii uu Qorilow ka geystay 90/91, Cabdullahi Kullane (Jiis Marreexaan), Zakariye Ismaciil, Gen. Xijaar iyo Saciid Kampala oo dhammaantood ah xubno la shaqeysta amaba toos uga katirsan kooxaha laayaanka ah ayaa ah cidda uu ku soo dhaco warka dhagarta leh ee lagu xasuuqi rabo masaakiin isugu jira maati haween ah oo jeeblayaal, Caruur aan soo quraacan oo u socda iskuullada, waayeel wareersan oo wixii uu maanta siin lahaa caruurta oo xalay ka qadday soo qaraab tagaty iyo in badan oo kale quud la dirir ah.
Afar sano iyo Afar bilood oo ay dalkaan ka talinayeen Fahad iyo Farmajo iyo kooxo uu addunkoodii iyo aakhiradoodii baabi’iyey waxaa la soo maray halaag iyo dhibaato ay taariikhyahannadu ka sheekeyn doonaan, waxaasa ah cabsi weyn rabbi ma kaga wareejin doonaa talada doorashadaan soo socota, taas oo hadda dadaal adag ugu jiraan sidii ay u boobi lahaayeen haddii ay iibsan waayaan.
Waxaan la yaab leh in dadka badankood uu Alle ka cabsigii ka yaraaday oo ay been cad u sheegayaan si ay uga helaan NN nolol iyo dhaqaale ay mar waliba heli lahaayeen waayo rabbi ayaa u qoray inay helaan hasa yeeshee waxay ku xeran tahay inay xalaal ku helaan iyo xaaraan ku helaan. Qof waliba wixii loo qoray oo kaliya ayuu helayaa iyadoo aan loo eegin waddada uu ku helayo. Marka ama xaaraan ku doon sida kooxahaan oo xaqa ka indha qarso ama xalaal ku doon waa=xa kuu qoran waa lagu kulan siin.
Xildhibaanda iyo Gudoonka Golaha shacbiga, askarta lagu aaminay hubkii umadda ee ugu adeegaya kooxdan talada haya, siyaasiyiinta iimaankooda ku iibsaday dhadhamo yar iyo wadadaada u kala baxaya koox dadka laaysa iyo koox leyntaas ugu fadwoota oo dowladda NN dhaqaalahooda kaga qaata iyo shacabkii ladulmay aakhriro maxay kala mudan doonaan allow MOL ma u digtay dadkaas maanta oo berri marqaati maku furi doontaa?